HIM | Health in Myanmar » 2009 » March
New UNAIDS ED Sidibe interview
Intrepid Lankan journalist Macan Markar has cornered the new Executive Director of UNAIDS for this interview. The last paragraph is interesting. He appears to say that it is “we” or UNAIDS that is reopening the discussion with the Global Fund in Myanmar. It is the Country Coordinating Mechanism that opened the discussion.
MSF doctor in Burma notes limits on TB testing
This MSF doctor working in Burma has writtenanote on the limits of current field diagnostic testing for TB. TB and HIV go together.
ဂျက်ကီချန်း အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရှိသူများအား ကူညီပေး
ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ဂျက်ကီချန်း၏ ကမ္ဘာ့ ရုပ်ရှင်လောကတွင် ကျော်ကြားမှုကို အလေးထားပြီး နှစ်စဉ် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီဖြင့် မွေးဖွားလာသည့် ကလေးသူငယ်သန်းပေါင်း မြောက်များစွာတို့အတွက် ထိခိုက်ပစ်ပယ်ခြင်း အမျိုးမျိုးမှ သက်သာမှု ရရှိစေမည့် အကြောင်း ကူညီပံ့ပိုးလိုက်သည်။ lexiconstar
ကာကွယ်ကုသပြုစုလို့၊ အေအိုင်ဒီ အက်စ် တိုက်ဖျက်ဖို့၊ အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်စို့။
Author: HimBur | Category: Myanmar1 comment
အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါ တိုက်ဖျက် ရေးမှာ ကမ္ဘာ့လူသား အားလုံးရဲ့ အလေးထားမှုနဲ့ သွေးစည်း ညီညွတ်မှုကို ပြသနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးများ တွေ့ဆုံကာ ၁၉၈၈ခုနှစ်မှ စတင်လို့နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ ရောက်တိုင်း ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ် ကျင်းပခဲ့ကြတာ ဆိုရင်
ဆေးဝါးတွေ ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန် လာခဲ့ပေမယ့် စရိတ်စက ကြီးမားမှုကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေမှာ ဆေးဝါး လိုအပ်နေတဲ့ HIV ပိုးရှိသူများရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်သာ ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုကို ရရှိလျက် ရှိကြောင်း ၂၀၀၇ ခုနှစ်ရဲ့ စာရင်းဇယား များမှာသာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ shweamyutay
ထောင်ဆေးထိုးအပ်ကြောင့် AIDS ရောဂါလက္ခဏာပေါ်
ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံရေးသမား တဦးအတွက် မိသားစုက ဆေးထိုးအပ်ကို သွင်းခွင့်မရပဲ ထောင်ကအပ်နဲ့ သူ့ကို ဆေးထိုးပေးခဲ့လို့ အခုအခါ AIDS ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ပေါ်နေ RFA 2008-10-14
New HIV prevalence figures among sex workers
HIV prevalence figures are often released to the mass media and presented without the information that allow HIV professionals to make programmatic decisions based on them. In the past only sex workers in Mandalay and Yangon were tested and the sampling was biased. This (sentinel?) survey data may be better. Can any readers help?
ပြည့်တန်ဆာများ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ကူးစက်နှုန်း မြင့်မား
၂ဝဝ၇ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခုခံကျရောဂါကြောင့် သေဆုံးခဲ့သူပေါင်း ၂၅ဝဝဝ (နှစ်သောင်းခွဲ) ရှိသည်ဟု ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလက ထုတ်ဝေသည့် နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့ (MSF) ၏ အစီရင်ခံစာတစောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။﻿ Irrawaddy 18 March 2009
Sex work guidance
A sex work guidance document has just been published by UNAIDS. It isabig improvement over the last one.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုနှစ်အတွင်း အေအိုင်ဒီအက်စ်ကြောင့် လူ ၂၅,၀၀၀ အထိ သေဖွယ်ရှိ
နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထိရောက်သည့် ကုသမှု မရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါဖြင့် သေဆုံးမည့်သူ ဦးရေမှာ ယခုနှစ်အတွင်း ၂၅,၀၀၀ အထိ ရှိလာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အေ့ဒ်စ်ရောဂါကုသရေးအတွက် ဆေးဝါးများ ပိုမိုလိုအပ်လျက်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း HIV/ AIDS ခံစားနေရသူတွေအတွက် သက်သာစေနိုင်တဲ့ ART (antiretroviral treatment) ကုသမှုကို လောလောဆယ် ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ အနေအထားထက် ပိုပြီး လိုအပ်နေပြီလို့ MSF ခေါ် နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များ အဖွဲ့က အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ RFA: 2008-11-25
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ HIV/AIDS တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးစရိတ် နည်းပါးမှု
မြန်မာပြည် စစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံအတွက် အသုံးစရိတ်များသည် စစ်တပ်အတွက် အသုံးစရိတ်တွေသာ များပြားပြီး ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးအတွက် အသုံးစရိတ်များ အင်မတန်မှ နည်းပါးကြောင်း ကမ္ဘာ့သတင်း စာမျက်နှာများတွင် မကြာခဏဆိုသလို တွေ့ မြင်နေကြရပါသည်။ ယခုလည်း မြန်မာစစ် အစိုးရသည် ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ငွေသုံးစွဲတာ အလွန်နည်းပါးနေကြောင်း အထူးသဖြင့် HIV/AIDS ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အနေနဲ့ တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ နှစ်သိန်းသာ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် ဒီငွေ ပမာဏဟာ လွန်စွာမှ နည်းပါးနေသေး
Keep the musician and clown out of Myanmar / Burma
The [him] moderator hopes that Burma / Myanmar is spared the help of this guy. Part musician and part clown describes him perfectly.
What *are* HIV priorities in Asia
Archives Select Month February 2018 (7) January 2018 (21) December 2017 (13) November 2017 (11) October 2017 (17) September 2017 (18) August 2017 (11) July 2017 (21) June 2017 (21) May 2017 (22) April 2017 (22) March 2017 (23) February 2017 (16) January 2017 (24) December 2016 (17) November 2016 (22) October 2016 (22) September 2016 (21) August 2016 (13) July 2016 (20) June 2016 (23) May 2016 (15) April 2016 (19) March 2016 (29) February 2016 (21) January 2016 (20) December 2015 (20) November 2015 (21) October 2015 (22) September 2015 (39) August 2015 (34) July 2015 (47) June 2015 (53) May 2015 (47) April 2015 (33) March 2015 (50) February 2015 (51) January 2015 (47) December 2014 (54) November 2014 (49) October 2014 (53) September 2014 (44) August 2014 (38) July 2014 (55) June 2014 (46) May 2014 (42) April 2014 (36) March 2014 (60) February 2014 (51) January 2014 (50) December 2013 (54) November 2013 (35) October 2013 (47) September 2013 (40) August 2013 (39) July 2013 (50) June 2013 (45) May 2013 (37) April 2013 (42) March 2013 (60) February 2013 (49) January 2013 (63) December 2012 (57) November 2012 (67) October 2012 (68) September 2012 (41) August 2012 (50) July 2012 (72) June 2012 (56) May 2012 (57) April 2012 (29) March 2012 (67) February 2012 (78) January 2012 (65) December 2011 (84) November 2011 (65) October 2011 (49) September 2011 (55) August 2011 (59) July 2011 (42) June 2011 (64) May 2011 (44) April 2011 (55) March 2011 (56) February 2011 (45) January 2011 (48) December 2010 (38) November 2010 (31) October 2010 (38) September 2010 (39) August 2010 (83) July 2010 (82) June 2010 (107) May 2010 (55) April 2010 (67) March 2010 (85) February 2010 (59) January 2010 (57) December 2009 (60) November 2009 (46) October 2009 (59) September 2009 (59) August 2009 (46) July 2009 (55) June 2009 (51) May 2009 (86) April 2009 (79) March 2009 (47) February 2009 (51) January 2009 (32) December 2008 (31) November 2008 (33) October 2008 (27) September 2008 (34) August 2008 (18) July 2008 (11) June 2008 (27) May 2008 (32) April 2008 (18) March 2008 (37) February 2008 (37) January 2008 (13) December 2007 (41) November 2007 (39) October 2007 (37) September 2007 (47) August 2007 (42) July 2007 (33) June 2007 (32) May 2007 (5) April 2007 (27) March 2007 (38) February 2007 (27) January 2007 (32) December 2006 (21) November 2006 (20) October 2006 (31) September 2006 (30) August 2006 (12) June 2006 (12) May 2006 (9) April 2006 (6) March 2006 (33) February 2006 (29) January 2006 (15)